Hard disk ကို | October 2019
ကွန်ပျူတာဒုတိယ hard disk ကိုချိတ်ဆက်ရန်နည်းလမ်းများ
အခုဆိုရင်သင့်ကွန်ပျူတာကိုတ hard drive ကိုမလုံလောကျသညျ့အခါအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ပို. ပို. အသုံးပြုသူများကသင့်ရဲ့ PC မှာတစ်စက္ကန့် HDD ချိတ်ဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပေမယ့်လူတိုင်းမအမှားတွေကိုရှောင်ရှားရန်မှန်ကန်စွာကိုယ့်ကိုကိုယ်ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိ၏။ တကယ်တော့, တစ်စက္ကန့် disk ကိုဖြည့်စွက်၏ဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်းနှင့်မျှမကအထူးကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သည်။
တစ်ဦး hard drive ကိုပြုပြင်ဖို့ကိုဘယ်လို
အချို့ကိစ္စများတွင်သင် drive ကို၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြန်လာခွင့်ပြုတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, - hard drive ကိုပြန်လည်ပြုပြင်။ ကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လေးနက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြင်ပေးဖို့စက်ကိရိယာ၏သဘောသဘာဝဖို့များသောအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှသည်မဟုတ်, အဆုတ်ပြဿနာတွေအထူးကုမှမသုံးပဲဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေးသို့သင်၏လက်ကိုပြန်သွား HDD နှင့်အတူ hard drive ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပင်က BIOS ကိုမြင်နိုင်သည်မဟုတ်ဘယ်မှာကိစ္စများတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။
Disk defragmenter စ - အဓိကအားဖြင့် Windows ကိုပိုကောင်းအောင်အသုံးပြုကြသည်ထားတဲ့ဖိုင်တွေ၏အပိုင်းအစများသို့ကျိုးပဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးနေတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ နီးပါးကို PC အရှိန်မြှင့်အပေါ်တိုင်းဆောင်းပါးကောင်စီအကငျြ့ Defragmentation တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်အသုံးပြုသူများကို Defragmentation သောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်နှင့်ထိုသို့ပြုမှလိုအပ်သောသည်အဘယ်အရာကိစ္စများတွင်သိနှင့်အဘယ်သို့မဟုတ်ကြဘူး; အဘယ်အရာကို software ကိုဒီအတှကျအသုံးပွုသငျ့ပါတယျ - Built-in utility ကိုလုံလောက်, သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦး Third-party program ကို install သာ. ကောင်း၏ရှိမရှိ။
အဆိုပါ hard disk ကို partition ကိုဖယ်ရှားခြင်းတို့အတွက်နည်းလမ်းများ
အတော်များများက hard drive တွေနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောကဏ္ဍများသို့ခွဲခြားထားတယ်။ များသောအားဖြင့်သူတို့ကအသုံးပြုသူရဲ့လိုအပ်ချက်သို့ခွဲခြားထားတယ်နှင့်လွယ်သိုလှောင်ထားသည့်ဒေတာ sorting များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ လက်ရှိ partitions ကိုများထဲမှဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိတော့သည်ဆိုပါက, ကဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်, အခြားသော disk ကိုချိတ်ဆက်ရန်အဆိုပါထဲကအသုံးမပြုတဲ့အာကာသ။ ထို့အပြင်, ဒီစစ်ဆင်ရေးကိုသင်လျင်မြန်စွာ partition ကိုပေါ်မှာရှိသမျှ data တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
Hard drive - ဆိုကွန်ပျူတာ၏အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ သို့သော်သူကအထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောအမှားမှဖြစ်ပေါ်နိုင်။ ဒါကြောင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကျိုးကဏ္ဍအလုပ်၏ပြီးပြည့်စုံသောစွန့်ခွာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပြီးတစ်ဦးကို PC သုံးစွဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ယင်း၏အကျိုးဆက်များနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ထက်ပြဿနာတစ်ခုပေါ်ပေါက်ရေးကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အမြဲတမ်းပိုမိုလွယ်ကူ။
Hard drive တွေ, Flash ကို-drives တွေကို, game consoles စများနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များအတွက်ကို USB-port များနှင့်အခြား connectors တပ်ဆင်ထားအတော်များများခေတ်မီတီဗီ။ ဤမျက်နှာပြင်ကနေတဆင့်ကိုယ့်ညနေပိုင်းတွင်ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းနှင့်ယခုမီဒီယာစင်တာကြည့်ရှုများအတွက်မော်တော်ယာဉ်မပေးပါဘူး။ ဘယ်လိုတီဗီ hard disk ကို drive ကိုရန် hard drive ကိုချိတ်ဆက်ဖို့မီဒီယာအကြောင်းအရာနှင့်အခြားအရေးကြီးအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထားဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကြောင့်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများ, အသုံးပြုသူများသည်သမားရိုးကျ hard drive ကိုတစ်ဦးထံမှပြင်ပ hard drive ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပေမည်။ ဒါဟာသင့်ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လုပ်ဖို့လွယ်ကူသည် - ရုံလိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့အရာအနည်းငယ်ရူဘယ်ဖြုန်းနှင့်ပရိသတ်အများနှင့်မပို 10 ထက်မိနစ် connection ကိုပေးစေခြင်းငှါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဆောက်အဦးပြင်ပ HDD ပြင်ဆင်နေအနေနဲ့ external HDD ၏ဖန်တီးမှုဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုအောက်ပါအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြစ်ပေါ်: အဆိုပါရရှိနိုင်ပါသည် hard disk ကို, ဒါပေမယ့်မဆိုအခမဲ့စနစ်ယူနစ်အတွက်အာကာသ, ဒါမှမဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဖြစ်နိုင်သောအဘယ်သူမျှမကချိတ်ဆက်ဖို့ရှိ၏ HDD ခရီး / အလုပ်ဒါမှမဟုတ် Motherboard ကတဆင့်အမြဲတမ်းဆက်သွယ်မှုများအတွက်မလိုအပ်ပေါ်တွင်သင်နဲ့အတူယူရန်စီစဉ်လျက်ရှိ၏ လက်ပ်တော့သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားခံရဖို့ drive ကို; တစ်ဦးချင်းစီအသှငျအပွငျ (ခန္ဓာကိုယ်) ကိုရွေးချယ်ဖို့အလိုဆန္ဒ။
တစ်ဦး hard disk ကိုအပေါ်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး Jumper
အဆိုပါ hard disk ကိုစိတျအပိုငျးတစျခုမှာတစ်ဦး Jumper သို့မဟုတ် Jumper ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည် IDE mode မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်, အဟောင်းတွေအတွက် HDD ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ဒါပေမယ့်လည်းခေတ်သစ် hard drive တွေမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ hard disk ကိုအပေါ်ရည်ရွယ်ချက် Jumper နှစ်အနည်းငယ် hard drive တွေလွန်ခဲ့တဲ့ယနေ့ပေါရာဏဟုယူဆသော, IDE mode ကိုထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
အဘယ်အရာကိုသင့် hard disk ပေါ်မှာဖိုင်တွေအညွှန်းထည့်နေပုံကို
OS ကို windose အဆိုပါ hard drive ကိုအပေါ်ဖိုင်များကိုအညွှန်းထည့်နေပုံကိုများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းတဲ့စနစ်အစိတ်အပိုင်းပါရှိသည်။ ဤဆောင်းပါး၌သငျသညျကပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာနှင့်ဘယ်လို disable လုပ်ဖို့များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိ, ဒီဝန်ဆောင်မှုကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်, အဘယျအကွောငျးကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Windows ကိုလည်ပတ်မှုစနစ်များအတွက် hard drive ကို indexing service ကိုဖိုင်တွေအပေါ် indexing အသုံးပြုသူများသည် '' devices များနှင့်ကော်ပိုရိတ်ကွန်ပျူတာကွန်ရက်များပေါ်တွင်စာရွက်စာတမ်းများ၏ search ၏အမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အများအပြားသည်အသုံးပြုသူများအဘို့, hard drive ကိုမှာသိမ်းထားတဲ့ဒေတာအများကြီးပိုအရေးကြီးတဲ့ device ကိုထက်သည်။ device ကိုအမိန့်များထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်သို့မဟုတ်အမှတ်တမဲ့ချပ်ထားပြီးလျှင်, အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက် (စာရွက်စာတမ်းများ, ဓါတ်ပုံများ, ဗီဒီယို) ကနေဖယ်ရှား, သငျသညျအထူးဆော့ဗ်ဝဲကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒေတာဆယ်တင်ရေးတို့အတွက်တစ်ဦးပျက်စီးသွားသော HDD ထဲကနေဒေတာတွေကိုပြန်လည်များအတွက်နည်းလမ်းများ, သင်အရေးပေါ် bootable USB flash drive ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်အခြားကွန်ပျူတာတစ်ခုချွတ်ယွင်း HDD ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏ hard drive ကိုအပေါ်အလုံအလောက်နေရာလွတ်ရှိသည်, နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ပါဘူးတဲ့အခါမှာသူကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး, ငါတို့အသစ်ကဖိုင်တွေနဲ့ဒေတာအတွက်သိုလှောင်မှုအာကာသတိုးမြှင့်ဖို့အမျိုးမျိုးသော options များထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရှိသည်။ အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခု hard disk ကိုအဖြစ်ကို flash-drive ကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ hard drive ကိုကွန်ပျူတာကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ပြဿနာ, အတော်လေးဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကအသစ်သို့မဟုတ်ယခင်ကအသုံးပြုပြင်ပနှင့် built-in HDD နှင့်အတူဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားမီ, သငျသညျထိုပြဿနာကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ရာမှထွက်တွက်ဆဖို့လိုပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသူများကိုယ်တိုင် hard disk ကိုအတူဆက်စပ်အခက်အခဲများကုစားနိုင်သည် - ကဂရုတစိုက်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်လုပ်ရပ်အတိုင်းလိုက်နာဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသူများကသူတို့ကွန်ပျူတာတဦးတည်းပြည်တွင်းရေး drive ကိုမှာရှိသည်။ သင်ပထမဦးဆုံး install အခါ operating system ကိုအပိုင်းအချို့အရေအတွက်က၎င်း၏ပျက်ပြားကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုယုတ္တိအသံအတိုးအကျယ်အချို့သောအချက်အလက်များ၏သိုလှောင်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ကကွဲပြားခြားနားတဲ့ဖိုင်စနစ်, ထိုသူနှစ်ယောက်အဆောက်အဦများ၏တဦးတည်းအတွက်ကို format နိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုသူရဲ့ hard drive ကိုအဘို့အပေါငျးတို့သအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များတွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကနေ Device ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်, အဲဒါကိုအပေါ်စကားဝှက်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားဖို့အကြံပြုသည်။ ဤသည် built-in Windows ကိရိယာတွေသို့မဟုတ်အထူးဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ သင့် hard drive ပေါ်တွင်စကားဝှက်ထားရန်ကဘယ်လို, သင်သည်သင်၏တစ်ခုလုံးကို hard drive ကိုသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီ partitions ကိုအပေါ်စကားဝှက်တစ်ခုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
အဘယ်အရာကိုသင့် hard drive ကို၏ format မပါသောအခါလုပ်ဖို့
HDD ကို format - လျင်မြန်စွာပေါ်မှာသိမ်းထားတဲ့အားလုံးဒေတာကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဖိုင်ကိုစနစ်အားပြုပြင်မွမ်းမံရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစမကြာခဏ operating system ကိုတစ်ဦး "စင်ကြယ်သော" တပ်ဆင်ခြင်း, ဒါပေမယ့် Windows ကဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ဆောင်မပြုစေခြင်းငှါအရာအတွက်တခါတရံတွင်ပြဿနာကို format ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါကြောင့် drive ကို format ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာအတွက်အများအပြားအခြေအနေများရှိနေပါသည်အဆိုပါ hard drive ကို format ချကြသည်မဟုတ်သောအကြောင်းပြချက်များ။
ပုံစံချပေးအားဖြင့် drive ကိုအထူးအမှတ်လျှောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာအသစ်အ drives တွေကိုအတှကျအသုံးပွုနှင့်အသုံးပြုမှုရှိကြ၏နိုင်ပါသည်။ အသစ်က HDD ကို format က operating system ကိုမြင်မည်မဟုတ်ပါပေးသောခြင်းမရှိဘဲ, markup ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပေသည်။ သင့် hard drive ကိုပြီးသားသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုရှိပါတယ်ဆိုပါကဖျက်နေပါတယ်။
ယခုအချိန်တွင် PS4 ဂိမ်း console ကိုအကောင်းဆုံးနဲ့ကမ္ဘာ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးရှေ့ဆက်စဉ်းစားသည်။ ပို. ပို. အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးကို PC ပေါ်မှာထက် device ကိုပေါ်မှာကစားရန်ပိုနှစ်သက်။ ဒါဟာအသစ်ထုတ်ကုန်၏ဒီစဉ်ဆက်မပြတ် output ကိုကိုအထောက်အကူပြုရန်သီးသန့်အပေါင်းတို့နှင့်စီမံကိန်းများ၏တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေးအာမခံပါသည်။ သို့သော် internal memory က PS4 က၎င်း၏န့်အသတ်ရှိပြီး, တခါတရံတွင်ထားရှိအားလုံးဝယ်ယူဂိမ်းများကိုမရှိတော့လည်းမရှိ။
အခုဈေးကွက်ထဲမှာပြည်တွင်းရေး hard drive တွေတစ်ခုချင်းစီနဲ့အခြားအများအပြားထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်။ သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီကိုပိုမိုအသုံးပြုသူများ၏အာရုံကို, အံ့သြစရာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ features တွေသို့မဟုတ်အခြားကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်အခြားအကွဲပြားခြားနားမှုကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းစတိုးမှကိုရယူသုံးခြင်းအားဖြင့်, user က hard drive ကိုရွေးချယ်ခြင်း၏ခက်ခဲတာဝန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ဖြစ်ပါတယ်။